गभर्नर - Aarthiknews
आज मात्रै पहिलो नीतिगत निर्णयको रुपमा कोरोनाको असर अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने तथा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थामा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर अध्ययन प्रतिवेदन...
सन् १९९४ मा राष्ट्र बैङ्कका उपनिर्देशक भइसक्नुभएका अधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको रहनेछ । नवनियुक्त गभर्नर अधिकारीले खोटाङको सिम्पानी माविबाट विसं। २०३८ सालमा एसएलसी उत्तिर्ण गरे । ...
नव नियुक्त गभर्नर अधिकारीले लगानी बोर्डमा हुँदा के के गरे
अधिकारी पछिल्लो चार वर्षदेखि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन । अधिकारीले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको समेत आयोजना गरे । बोर्डले संयोजन गरेका...
‘राष्ट्र बैंक भित्रकै योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने’
नयाँ गभर्नर स्वच्छ छवी भएका राष्ट्र बैंक भित्रकै योग्य र सक्षम व्यक्ति बनाइनुपर्ने विज्ञहरुको धारण छ । आइतबार एक कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गर्भनरमा...
चिरन्जिवी नेपालको कार्यकाल सकिनैलाग्दा मुलुकको नयाँ गभर्नर को बन्ला भन्ने विषयमा चर्चा चुलिएको छ। गभर्नर नेपाल चैत ५ मा अवकाश हुँदैछन्। उच्च पदमा ‘राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे’ नियुक्ति गर्ने प्रचलनका कारण...
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको अवकाश नजिकिँदै गर्दा भावी नेतृत्वमा आउने दौड सुरु भएको छ । डा.नेपाल ७ चैतबाट बिदा हुँदै छन्। एक महिनाअघि बिदा बस्ने सामान्य प्रचलन भए...
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ ७७ दिनपछि पुनः काममा फर्किएका छन् । कात्तिक १८ गतेदेखि निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ सोमबारदेखि पुनः कार्यालय फर्किएका हुन् । ...
सफाइ पाएका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ आईतबारबाट काममा फर्किने
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप पुष्टि नभएपछि सरकारले सफाइ दिएको छ । सफाइ पाएका श्रेष्ठ आगामी आइतवारदेखि काममा फर्किने भएका हुन् । ...
गभर्नरको लिगलिगे दौडमा को को अगाडि ?
मौसम चिसो भएपनि अबको गभर्नर को हुने भन्ने चर्चाले वित्तीय क्षेत्र तातेको छ । गभर्नरको लिगलिगे दौडमा रहेका पनि साना तिना कोठे गफदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलाीसम्मलाई भेट गर्न पुगेका छन्...
दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको रकमको रकमान्तर गरि पठाएमा वा भुक्तानी दिएको कारोवार, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा पाँच लाख...
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले सूचना प्रविधिमा बैंकहरुले पर्याप्त लगानी नगर्ने हो भने बैंकले तीन वर्षमा कमाएको पैसा एक मिनेटमा नै स्वाह हुने चेतावनी दिएका छन् । नेसनल...